विवादित अभिव्यक्ति दिने भारतीय सेना प्रमुखलाई किन स्वागत ? - Jhilko
गृहपृष्ठ ∕ बिचार ∕ विवादित अभिव्यक्ति दिने भारतीय सेना प्रमुखलाई किन स्वागत ?
विवादित अभिव्यक्ति दिने भारतीय सेना प्रमुखलाई किन स्वागत ?
झिल्को डटकम २०७७, कात्तिक १ गते १५:२० मा प्रकाशित
उसो त नेपाल भारत आमने सामने लडिरहेका छैनन् तर मनोवैज्ञानिक रुपमा नेपालीहरु भारतसँग युद्धको मनस्थितिमा नै छन् । भारतले नेपालको भूूमि मिचेको छ । कालापानी, लिपुलेकमा नेपाली भूमिमा नयाँ रोड बनाएर उसले नेपाली राष्ट्रियतामाथि धाबा बोलेको मात्रै छैन, नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्शालाई अमान्य भनेर नेपालमाथिको हैकम सदर गर्न खोजिरहेको छ । अनि नेपालको नयाँ नक्शालाई चिनियाँ उक्साहटको कदम भनी टिप्पणी गर्ने उनै भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरभाने कात्तिकको अन्तिममा नेपाल आउने भएका छन् । यसअघि ०७६ माघ २० गते नै नेपाल आउने तय भएका नरभानेको कोरोना महामारीका कारण भ्रमण रोकिएको थियो । यद्यपि उनको भ्रमण तालिका भने सार्वजनिक भएको छैन । उनले कालापानी लिपुलेकका विषयमा एक विवादास्पद अभिब्यक्ति दिएका थिए ।
यसले नेपाली समाजलाई अहिले फेरि कोरोना महामारी र दशै जस्ता चाडबाडका बीच पनि निकै तरंगित गरिरहेको छ । नेपालको निम्तोमा आउने भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरभानेलाई स्वागत गर्ने नेपाली सेनाको तयारी क्रमशः विवादमा पर्दै गएको देखिएको छ ।
औचित्यहीन मानार्थ पदवी
भारतका स्थलसेनाध्यक्ष र नेपालका प्रधानसेनापतिबीच आपसमा दुबैले एक अर्कालाई स्थल सेनाध्यक्षको मानार्थ सेनापति मान्ने प्रचलन रहेको छ । यसको औचित्य र आवश्यकता किन ? अब मिहिन बहस हुनुपर्छ । नेपालका लागि उत्तरी छिमेकी चिनसँग यस्तो परम्परा छैन, अन्य सार्क देशहरुसँग पनि यस्तो चलन छैन ।
अन्य परका देशहरुसँग त झन सामान्य औपचारिक सम्बन्ध मात्र छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा केवल भारतका स्थल सेनाध्यक्षलाई मात्र यस्तो मानार्थ पदवी किन दिने ? यो छिमेकीप्रतिको समानताका आधारमा सम्बन्ध राख्ने हिसावले पनि मनासिव छैन । यस्तै चलन अन्य देशहरुसँग भएको भए पनि त्यसको औचित्य हुन सक्थ्यो । तर, अरु देशलाई समदुरीमा नराखीकन अभ्यासमा राखिएको यो निरर्थक प्रचलन कम्तिमा दुई तिहाई बहुमतको नेकपा सरकारले, वर्तमान केपी ओली सरकारले अब अन्त्य गर्न पहल गर्न सक्नुपर्छ ।
यही कात्तिक दोस्रो साता तीन दिने नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका भारतीय स्थल सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमण उनलाई मानार्थ नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिको फुली लगाइदिन मात्रै हुन लागेको हो भने पनि गलत छ । त्यसमाथि कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएर नेपाल भारत दुबै देश थला परेका बेला यो खालको भ्रमणको कुनै औचित्य नै छैन । बेलाका हिसाबले यो कुबेलाको भ्रमण हो । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा दुबै देशका सबै सेना र अन्य शक्ति जुटनु पर्ने महामारीको घडीमा यसरी गरिने भ्रमणको कुनै तुक रहदैन ।
अहिले नयाँ नक्शा जारी पछि नेपाल भारतबीच राजनीतिक र कुटनीतिक स्तरमा संवादहीनताको चरम अवस्था छ । भारतले नेपाललाई पेलेर तह लगाउन खोजिरहेका बेला किन फेरि भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरभानेलाई रातो कार्पेट ? प्रश्नहरु जनजनले घरघरबाट सोधिरहेका छन् ।
नक्शा प्रकरणको पटाक्षेपबिनाको स्वागत गलत
ओपन सेक्रेट हो कि केही समयअघि नेपालले आफ्नो भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्शा जारी गरेपछि त्यसको विरोधमा भारतीय स्थल सेनाध्यक्षले खुल्लमखुल्ला आलोचना र विरोध गरे । उत्तरी छिमेकी चीनको नामै नलिइकन भारतीय स्थल सेनाध्यक्षले चीनको उक्साहटमा नेपालले भारतीय भूमि समेटेर नयाँ नक्शा जारी गर्दै तनाव बढाउन खोजेको मिथ्या आरोप लगाए ।
एक त सीमाको विषयमा टिप्पणी गर्ने अधिकारी नै भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष होइनन् । उनी आफनो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर नेपालको नयाँ नक्शाबारे बोले । दोस्रो उनले कुटनीतिक र राजनीतिक अथोरिटीले नयाँ नक्शा प्रकरणमा मौनता साँधिरहेको बेला अगाडि सरेर गलत तथ्य बोले । उनको यो टिप्पणीलाई भारतीय राजनीतिक सत्ता, मोदी सरकार र उनको विदेश मन्त्रालयले मौन समर्थन दिएको आभास घटनाक्रमरुले दिए । भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालको नयाँ नक्शालाई मान्यता नदिने बतायो ।
नेपालले आफ्नो भूमि समेटेर जारी गरेको नक्शालाई मान्यता नदिने र त्यो काम नेपालले चीनको उक्साहटमा गर्यो भन्ने भ्रामक र तथ्यहीन आरोप लगाउने भारतीय स्थलसेनाध्यक्षलाई अहिले नेपालले कोरोना माहामारीका बीचमा रातो कार्पेट विच्छ्याएर उल्टै मानार्थ सेनापतिको पगरी गुथाउनु पर्ने कुनै आवश्यक्ता नै छैन । यो नेपाली सेनाले गर्न नहुने काम गर्दैछ ।
तयारी प्रतिवादको गर्ने कि चाकडीको ?
आफ्ना सबै छिमेकी देशहरुसँग सीमा विवाद र झडपमा उल्झिरहेको भारतले नेपालमा पनि नयाँ प्रकरणमा निहुँ खोजिरहेकै छ । उस्तै परे सीमा विवादमा भारत र नेपालबीच कुनै पनि बेला युद्ध हुन सक्ने सम्भावना छ । नेपालले भारतीय सेनासँग आफनो भूमि जोगाउन सम्भावित युद्धको तयारी गर्नपर्ने बेलामा अहिले उल्टै भारतीय स्थल सेनाध्यक्षलाई नेपाल बोलाएर स्वागत गर्नुको कुनै औचित्य छैन । सामान्य अवस्था होइन यो । असामान्य अवस्थामा किन नेपाली सेना भारतीय सेनाध्यक्षको चाकडीमा उत्रने ? यो निकै अहम सवाल हो ।
रक्षामन्त्रीको बिदाइपछि नै भ्रमण तय, देखियो रहस्यमय
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई रक्षामन्त्रीबाट सरुवा गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याएपछि देशको रक्षामन्त्रालयको कार्यभार पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै काँधमा परेको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले अन्य कैयन घरेलु र वाह्य कामको चटारोमा व्यस्त हुनुपर्ने समय छ । यस्तो बेलामा किन भारतीय स्थलसेनाध्यक्षलाई निम्ता गरियो भन्ने कुरा पनि आफैमा निकै रहस्यमय छ । अहिलेको समय कुनै पनि हिसाबले विदेशी सेनाको स्वागतमा देशको मुख्य सुरक्षा अंग नेपाली सेना अल्झिने समय होइन । देशका कार्यकारी प्रधानमन्त्री यस्ता औचित्यहीन स्वागत र भेटघाटमा व्यस्त हुने समय यो कुनै पनि जोड र कोणबाट होइन । यो सबै जोड र कोणबाट गैरप्राथमिकताको काम हो सरकारका लागि । किनभने कोरोना पीडित जनताको जिउधनको रक्षा गर्न सरकारले दिनरात नभनी काम गर्नुपर्ने बेलामा विदेशी सेनापतिलाई स्वागत गर्न दिनहरु खर्चनुको कुनै तुक देखिदैन ।
सम्बन्ध परिमाजर्न हुन्छ त ?
जसरी नेपाल भारत सम्बन्धलाई रोटीबेटीको संज्ञा दिइन्छ, त्यसैगरी नेपाल भारतबीचको सैनिक सम्बन्धलाई पनि ऐतिहासिक र पारस्पारिक रुपमा लिइन्छ । तर, अब बदलिएको युगमा नेपाल र भारतबीचको सैन्य सम्बन्धलाई पनि नयाँ रुपमा परिमार्जित र परिभाषित गर्न आवश्यक छ ।
नेपालका ३० हजार बढी भारतको गोर्खा सेनामा छन । यसले नेपालीहरुको भारतीय लाहुर जाने अघोषित अभ्यासलाई पनि रोक्नुपर्ने आवाज बिभिन्न तहबाट समय समयमा उठ्दै आएको छ । अहिले नेपाली युवाको गोर्खाभर्ती केन्द्र खारेजीको प्रश्न छ एकातिर भने अर्कोतिर गोर्खा सेना मार्फत नेपालीहरुलाई भारतले अन्य देशहरुसँगको लडाईमा मार्ने मराउने गराउने गलत अभ्यास पनि जारी छ ।
यी सबै सवालहरुलाई समयानुकल नयाँ परिभाषाका साथ यस्ता गलत अभ्यासलाई रोक्न वर्तमान सरकारले अब क्रान्तिकारी योजना र कार्यक्रमका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ, न कि जसो जसो भारत उसै उसै स्वाहा गर्ने पुरातन अभ्यासको निरन्तरता ।
असंलग्नताको टेको लिएर नेपालको विकास खोज्नुपर्ने आवश्यकता
अमेरिकासँगको नयाँ रक्षा सम्झौताका लागि भारतलाई ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने कारणहरू